मर्जर पछि ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सिभिल बैंकलाई बल पुग्छः सिइओ किशोर महर्जनको अन्र्तवार्ता « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
मर्जर पछि ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सिभिल बैंकलाई बल पुग्छः सिइओ किशोर महर्जनको अन्र्तवार्ता
६ आश्विन २०७३, बिहीबार ०३:००
जुनबेला सिभिल बैंकको स्थापना भयो, त्यो समय बैंकिङ क्षेत्र लगानी योग्य पुँजी (तरलता) को चरम मारमा परेको थियो । यस्तो अवस्थामा स्थापना भएर पनि सिभिल बैंकले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । केहि ठूला परियोजनाहरु लगायत उद्योग व्यवयसायमा समेत बैंकले लगानी गर्दै आएको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर बैकको अहिलेसम्मको उपलब्धी र आगामी दिनका लक्ष्यको बारेमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनसंग गरिएको कुराकानीः
सिभिल बैंकको स्थापनाकालमा बेला बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) को चरम अभाव थियो । त्यो समयमा बैंकले जुन लक्ष्य लिएर स्थापना भएको थियो । आजको दिन सम्म आइपुग्दा कस्ता उपलधीहरु हासिल गर्न सफल भयो ?
परिसुचकको हिसाबमा हामीले सोचेको भन्दा उपलब्धी अलि कम भएको छ । तर, भोलुममा हेर्ने हो भने हामीले सोचे भन्दा बढी नै भएको छ । आज भन्दा करिब ६ बर्ष अगाडी हामी सञ्चालनमा आउदा २ अर्ब पुँजीले कति व्यापार गर्ने भन्ने योजना बनाएर केन्द्रिय बैंकलाई समेत बुझाएका थियौ । त्यो हिसाबले हेर्दा कुनै परिसुचक टाइट थियो होला कुनै परिसुचकमा उपलब्धीहरु बढी देखिन्थ्यो । तर, हामीले बिजनेस गर्दा गर्दै बजार कस्तो अबस्थामा पुग्यो भने तरलता निकै टाइट, ब्याजदर १२ प्रतिशत भन्दा माथि, बिजनेस भोलुम बजारमा नबढेको अवस्था, धैरै बैंक तथा वित्तीय संस्था र नबढेको बिजनेसको भागमा सबैले त्यसैमा लुछालुछ गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो अबस्थामा प्रोफिटको प्रेसर त छदै थियो । तरलताको समस्या एकातिर रहदै गरेको अवस्थामा हामीले २ बर्षको दौरानमा आइपिओ जारी गरेर दुइ अर्ब पुँजी पुग्दा समेत क्यापिटललाइजको रेसियोले बिजनेस बढाउनमा असहज परिदियो ।
त्यस पछि तुरुन्तै तेस्रो बर्षमा क्यापिटल कसरी बढाउने भन्ने कुरालाई अगाडी बढाउदै गर्दा मर्जरमा गयौँ । मर्जर जाने गृहकार्य गर्दा गर्दै एक्सीस डेभलपमोन्ट बैंक र सिभिल मच्र्चेन्ट वित्तीय संस्थालाई लियौँ । त्यस पछि हाम्रो २ अर्ब ६९ करोड चुक्ता पुँुजी पुग्यो । त्यस्तै चौथो बर्षमा बोनस सेयर मार्फत ३ अर्ब आठ करोड पुग्यो । त्यही बीचमा अर्को एउटा सस्था मर्जमा लिने योजना बनाउदै गर्दा नयाँ मौद्रिक निति जारी भयो । त्यसमा सबै बैंकहरुले पुँजी पु¥याउनु पर्ने त्यसमा पनि वणिज्य बैंकले २ अर्ब बाट सिधै आठ अर्ब पु¥याउनु पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था आयो । त्यस पछि अहिले आइएलएफसीसंग मर्जरको प्रोसेसमा छौँ । अब बैक बिस्तारै बलियो बन्दै गएको छ ।
यो दौरानमा धेरै कुराको अनुभव तपाईहरुले लिनुभयो । बैंक चलाउनको लागि कति पुँजी आवश्यक पर्दो रहेछ ?
यसमा ओर्नसको निर्णय अनुसार हुन्छ । हामी बैंकका व्यवस्थापक हौँ । ओनरको निर्णय अनुसार काम गर्ने हो । बिजनेस गरेर नीति र नियममा आबद्ध भएर नाफा कमाइ दिने हो । बोर्ड अथवा प्रमोटर्सहरुलाई यति सम्म व्यापार गरेर यति रिटर्न भए पुग्छ भन्ने फिलोसोफि छ भने त्यही हिसाबबाट जान सकिन्छ । २ अर्ब क्यापिटलले पनि पुग्थ्यो । तर २ अर्ब क्यापिटलले कति व्यापार गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ग्रोथ एअर एन्ड एअर ग्रोथ सोल्लो हुन्थ्यो होला । किनभने २ अर्ब क्यापिटलले १८ देखि १९ अर्ब म्याक्सिमम लोन बोक्न सक्छ, पहिलो केही बर्ष । किनभने एलसि व्यापार गर्नु प¥यो त्यस्तै अरु व्यापार पनि ओनरसिपमा आउछ । हरेक सम्पतीमा रिक्सवेटेज असाइन गर्दाखेरि भएको क्यापिटलाई भाग लगाउदै जानुपर्छ । यहि हिसाबले प्रमोटरहरुले चित्त बुझाएर अगाडी बढ्न सक्छन भने त्यही अनुसार जान पनि सकिन्छ । यती नै क्यापिटल चाहिन्छ भन्ने छैन । यहि हो कि फरक दुइ अर्ब क्यापिटल भएको खण्डामा प्रति कम्पनी लोन दिन सक्ने क्षमता भनेको २५ देखि ३० प्रतिशत नै हो । अर्थात ५० करोड देखि ६० करोड सम्म मात्रै हो । त्यो भन्दा बढी लोन दिन सक्दैनौँ जति सुकै ठूलो प्रोजेक्ट आए पनि हाम्रो लिमिटेसन त्यही हुन्छ । तर, क्यापिटल २ बाट आठ अर्ब हुनु भनेको त्यसको ३० प्रतिशत भनेको २ अर्ब ४० करोड हो । यस हिसाबले हेर्दा एउटै प्रोजेक्टलाई २ अर्ब भन्दा माथि लोन दिन सक्षम भयौँ । २ अर्ब पुँजी हुदाको बखत ५० मेगावाट र १०० मेगावाटका हाइड्रो प्रोजेक्ट आयो भने २० वटा बैंक जुटेर पनि त्यो पुँजी जुटाउन कठिन हुन्थ्यो । आज ८ अर्ब पुगे पछि ५ देखि ६ वटा बैंकले पनि त्यो पुँजी जुटाउन सहजै सक्छ । आफु कुन लिकमा बस्ने हो भन्ने बिचार प्रमोटरले गर्नु पर्छ ।
प्रमोटरको इच्छामा पुँजीको आवश्यकता निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु भयो । तर, नियामक निकायले त तपाईहरुलाई पुँजी बढाउन त बाध्यकारी बनायो नि हैन ?
मौद्रिक नीति मार्फत पुँजी बृद्धिको योजना ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य भनेका नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने चाहिने भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय सस्था हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो र समस्या धेरै भयो भन्ने कुरा विश्व बैंक र आइएफबाट आएको हो । हामीले पनि मुल्यांकन ग¥यौँ र केन्द्रिय बैंकले पनि मुल्यांकन गरेर नै नीति ल्याएको हो । किन्भने हामी भन्दा ५० गुना सय गुना अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यहाँ भन्दा कम बैंक तथा वित्तीय सस्था छन् ।
हामीकहाँ धेरै बैंक भएर नै समस्या आएको हो भन्ने हिसाबले कसरी घटाउने भन्दा पुँजी बृद्धिको कुरा ल्याउदा सस्थाको क्षमता बढ्छ र संस्थाको संख्या घटेपछि प्रतिस्पर्धा पनि स्वस्थ हुन्छ भन्ने हिसाबले मर्जर र पुँजी बृद्धिको कुरा ल्याउनु पर्ने बाध्यता भएको हो । जुन सोचाइमा मौद्रिक नीति आएको थियो । त्यो सोचाईले काम चै गरेन । किनभने त्यसताका ३२ वटा बैंकहरु थिए । यो चै घटेर १२ देखि १४ वटामा पुग्छ भन्ने सोचाई थियो । अहिले २८मा आएर अड्कीयो । यसले ख वर्ग र ग वर्गको बैंकलाई समेट्दै ल्याए क वर्गका बैंकहरुले । किनभने ख र ग वर्गका बैंकहरुलाई बढेको पुँजीमा व्यापार गर्नको लागि त्यती सहज छैन । व्यापार नबढेको अवस्थामा बैंकहरुले आफुले कहिले पनि नगरेको क्षेत्रमा लगानि गर्न थाले त्यसले गर्दा ख वर्गको र ग वर्गका वित्तीय संस्थाले गर्ने व्यापार पनि गर्न थाले । होम लोन, अटो लोन त्यती थिएन यसमा लागे । हुँदा साना साना ५ देखि १० लाख सम्मको लोनमा समेत लाग्न थाले यसले गर्दा ख र ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अगाडी बढ्न झन कठिन हुँदै आयो । यसले गर्दा धेरै सस्थाहरु क वर्गसंग जोडिन आए ।
सिभिल बैंकले कस्तो कस्तो क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउदै गएकोे छ ?
हामीले लगानी गर्दा पोर्टफोलियो बनाउछौ । हरेक बर्षमा हुने गर्छ । ३।३ महिनामा समिक्षा गरेर कुन कुन क्षेत्रमा ग्रोथ छ र कुन मा छैन । कुन क्षेत्र नयाँ आउदै छ भन्ने बिषयलाई हेर्दै आएका छौँ । अहिले विभिन्न उद्योग र आयोजनामा लगानी बढाउदै लगेका छौँ ।
सुचना प्रविधीको बढ्दो प्रयोगलाई मध्यनजर गरेर बैंकले कस्ता योजनाहरु अगाडी ल्याएको छ ?
सुचना प्रविधीले गर्दा बैंकिङको सिस्टमलाई निकै सहज बनाएको छ । कुनै पनि विकसित मुलुकको दाजोमा बैंकिङ कारोबार गर्दै आएका छौँ । आइटी भनेको चिज यस्तो भयो कि नेपालमा महिना दिनमा आइपुग्छ । अहिले हामीले प्रयोग गर्ने सफ्टवेर अमेरिकामा प्रयोग गरेका छौँ । अमेरिका र युरोपले गर्ने मेकानिजम हामीसंग पनि छ । त्यसलाई कसरी प्रयोगमा लिएर जाने भन्ने कुरा प्रमुख हो । अर्को भनेको कति सुरक्षित हिसाबले कारोबार गर्न सक्छौँ भन्ने नै हो । अहिले साइबर सुरक्षा प्रमुख समस्या छ । यो चुनौँतीलाई सामाना गर्ने भन्ने हो । यस हिसाबले हामीले एटिएम, मोवाइल बैंकिङ, ब्राञ्चलेस बैंकिङमार्फत वित्तीय सेवा विस्तारमा हामी निकै अगाडि छौं ।
अहिले हामी छैठौँ बर्षमा छौँ । २६ अर्बको लोनको पोर्टफोलियो र ३२ अर्बको डिपोजिटको पोर्टफोलियो छ । असार मसान्त सम्म ३ अर्ब ९ करोडको क्यापिटल पोजिसन छ । यो अबस्था सम्म आइपुग्नु भनेको ठूलो उपलब्धी हो । जुन बेला हामी सञ्चालनमा आयौँँ त्यो बेला निकै क्रिटिकल समय थियो । पुराना बैंकहरुलाई यो पोजिसनमा आइपुग्न १५ बर्ष लाग्यो । हामी चै यो अबस्थामा ५ बर्षमा नै आइपुग्यौँ । यस हिसाब हामी सन्तोषजनक नै छौँँ ।
अब ५ बर्ष भित्र सिभिल बैंकलाई कुन स्थानमा देख्न सकिन्छ ?
अहिले हामीले बिजनेस बढाउदै छौँ । पुँजी पनि बढ्दै छ । तर, गाह्रो छ । सन्तोषजनक रुपमा अर्थतन्त्र अगाडी बढ्न सकेको छैन । अब ८ अर्ब पुँजी पुग्दै छौँ । यहि बर्षमा हामी २६ अर्बको पोर्टफोलियोबाट हामी कमसेकम ४० अर्ब पोर्टफोलियो पु¥याउनै पर्छ । हैन भने हाम्रो आरोही बिलो ५ प्रतिशत हुन्छ । र अर्को सालमा ५५ देखि ६० अर्बको बीचमा पोर्टफोलियो पुग्नै पर्छ । त्यस पछि ७० देखि ७५ अर्बको पोर्टफोलियो पुगे पछि ७७ साल सम्म मजबुत हुन्छौँ । यदी थप बढाउने अवस्था नभएको खन्डमा । ८ अर्ब नै रहिरयो भने । आठ पछि १६ अर्बको हल्ला छ । इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स (आइएलएफसी) फाइनान्सबीच मर्ज हुदै छ । यस पछि बैंकको शाखा ५४ पुग्छ । युनिक फाइनान्स र हामा मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई खरिद गर्ने निर्णय भै सकेको छ । यो मर्जरबाट बैंकको व्यवसाय गर्ने क्षमता वृद्घि भई केहि ठूला परियोजनाहरु लगायत उद्योग व्यवयसायमा थप लगानी गर्न सहज हुने छ । यस्तै अर्को एक सस्था पनि हामी किन्ने तयारीमा छौँ । यस्तै सिभिल क्यापिटललाई लिएका छौँ । अब त्यसलाई बढाएर म्युचुवल फन्ड र पोर्टफोलियो म्यानेजम्यान्टको काम पनि गर्दै छौँ । साभार विजनेस प्लस
प्रकाशित : ६ आश्विन २०७३, बिहीबार ०३:००